USC ikhadi ezikhanyisayo credit | ezifana senzalo ikhomishana ukubala, imininingwane service
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ USC ikhadi ezikhanyisayo credit | ezifana senzalo ikhomishana ukubala, imininingwane service
isici esiyinhloko udumo yelangabi ephenduphendukayo UCS ikhadi ukuthi inkonzo ngokuthi "ribonucleic kamuva" iyatholakala. Kulesi inkonzo, ngisho noma komnikazi ngokukhetha "isamba semali" futhi "izitolimende" ngesikhathi ukuthengwa kwezimpahla kanye nezinsizakalo, ungashintsha ukuze udumo ezikhanyisayo kamuva uma kunesidingo. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuba ushintshe kalula kwi-Inthanethi noma ngocingo, inqubo eyisicefe ayidingekile.
Futhi, uma bhalisiwe kusengaphambili, yonke inkokhelo yenziwe ezikhanyisayo credit "Ukuvezwa ribonucleic" futhi ingenye amasevisi. Ngokusebenzisa le sevisi, ungakwazi ukugwema ukuba ucacise "in the credit ezikhanyisayo" ngesikhathi ngasinye yezitolo. Nokho, ngisho nalapho sitshelwe nanokuthi "kokukhokhwa yinhlama-sum" ngesikhathi yokukhokha phezu-the-counter, eqinisweni, ngoba lokho kwakuyobe ukhokha ezikhanyisayo credit, ake sinake lelo phuzu.
Ngaphezu kwalokho, ikhadi UCS futhi kukhona ikhadi "ezikhanyisayo ikhredithi", leli khadi bangathola inkonzo efanayo njengoba "Ukuvezwa ribonucleic".
ku ezikhanyisayo credit ukubuyiswa kwemali uhlelo
UCS ikhadi inkambo ejwayelekile futhi Yiqiniso eside, kusukela ezimbili "zezikhala Yiqiniso ejwayelekile futhi Yiqiniso eside", ungakhetha uhlelo ukubuyiswa kwemali. Uma ibhalansi etholakalayo nganoma usuku umnqamulajuqu wokuthi imfushane kunalokho noma ilingane 100,000 yen, esezingeni Yiqiniso 5,000 yen ngenyanga, ngokuhamba kwesikhathi eside 3,000 yen ngenyanga uzokhokhelwa.
Ngaphezu kwalokho, sisebenzisa ibhalansi at usuku umnqamulajuqu, lemali ukubuyiswa kwemali of course ngayinye ihlukile. Ngakho-ke, hhayi kuphela uhlelo buyiselo wakhetha ngesikhathi isicelo, kubalulekile ukusebenzisa ngenkathi njalo uyazi ibhalansi etholakalayo lwenyanga.
Inani kwemali ekhokhiwe, ngoba sihlanganisa imali kanye uthishanhloko, ngeke kudingeke ukuba eceleni ikhomishana.
yezitolo ezikhanyisayo credit nezimali UCS ikhadi ezikhanyisayo credit senzalo ikhomishini futhi ukubala indlela
UCS ikhadi we "eningi inani lenzalo yonyaka enikezwa 15. amaphesenti 0 ". Lokhu kuyoba izibalo isilinganiso njengoba inani lenzalo yonyaka enikezwa ngesikweletu ezijikelezayo.
isibonelo, ukuthenga imikhiqizo 10,000 yen credit ezijikelezayo ka UCS ikhadi, ukukhokhelwa isamba kunjalo wokuyibuyisa emva kwenyanga kuyoba "10,000 yen × 1.25% (1 inyanga sika lenzalo) = 10,125 yen". Ngamanye amazwi, ungabona ukuthi uyeza kusengozini iyona imali senzalo ka 125 yen. Ukuze nyangazonke ukubuyiswa kwemali imali akuyona enikelwe uthishanhloko zonke, ngesikhathi ukusetshenziswa let sika ngokuqinile ukuqinisekisa senkokhelo isimo ngenyanga.
inkomba | ukubala indlela ezikhanyisayo credit, kwiwebsite we sekulingisa
UCS ikhadi, usebenzisa "nithenga ribonucleic ukubuyiswa kwemali sekulingisa", ungakwazi kalula abale izimali senzalo. Uma ufuna ukwenza nanembuyiselo uhlelo olucacile, ungase uthande sekulingisa enjalo futhi bazame ngenkuthalo ukusebenzisa.